प्रचण्डको योजनामा गम्भीर धक्का, कांग्रेस सभापतीले नै भने : कुनै हालतमा भोट हाल्दैनौं प्रचण्डलाई !
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजनामा गम्भीर धक्का लाग्ने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
मङ्लबार, कार्तिक १६, २०७८ २:४७
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजनामा गम्भीर धक्का लाग्ने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको चर्को आलोचना गरेका हुन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
नारायणगढमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रचण्डले चितवन कांग्रेसलाई दिएको धोकाको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस९माओवादी गठबन्धन गरेर भरतपुर महानगरमा मेयरमा रेणु दाहाललाई जिताउन कांग्रेस लागेको थियो । त्यो बेला गठबन्धन भए पनि चितवनका अन्य स्थानीय तहमा दुवै पार्टी एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा सँगै रहेको माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा गठबन्धनको उम्मेदवार मानेर भोट हाल्नुपर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको देखिन्छ ।
यहि ९ गते प्रचण्डले अन्तिम पटक चितवनबाटै उम्मेदवारी दिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । ‘प्रचण्डको रणनीति बुझ्यौं, जसरी झुक्काइयो, अब झुक्किन्नौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘रुखमा बाहेक अन्यत्र भोट हाल्दैनौं भन्दा प्रचण्डलाई ज्वरो किन आउनुपर्यो ? ’
१२ गते प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी हुनुको साटो लखेट्ने कुरा गर्नु विडम्बना भएको बोलेका थिए । ‘रेणु र मलाई लखेट्ने भनेर सभापति भन्ने बोलेछन् भनेर प्रचण्डले बोल्नुभएछ,’ श्रेष्ठले जवाफ दिए, ‘सभापति भन्नेले होइन, चितवन कांग्रेसको सभापति हो भनेर राम्रोसँग बुझ्दा हुन्छ ।’